Taariikhda Suldaan Olol diinle – dhugasho
maxamedsheekafguun Febraayo 24, 2020 taariikh
Suldaan Olol Diinle Allaha u naxariistee isagoo aad u yar ayaa qoyskiisa ay geeyeen dugsiga quraanka oo uu ka dhigtay magaalada uu ku dhashey ee shilaabo halkaas ayuuna ku barbaaray.
“Ingiriis Axmaariyo Talyaani, wey akeekamiye
Odayaashan loo yeeray ee la anfac siinaayo
Asaxaabihii bayna yiri gaal ha aaminine
Hadaad niman Islaamiyo tihiin aadan ubadkiisa
Oydaan Ilaahay ka go’in hayna oodina”
Sannadkii 1947,kii Qabiiladii Soomaalida ee dhulka Itoobiya gumeysato degganaa oo dhan marka laga reebo qabiilka Ciise, waxa ay ka soo hor jeesteen in dhulkooda Xabashida lagu wareejiyo.Waxa ayna Ingiriiska ka codsadeen in cabashadooda Qaramada Midoobay loo gudbiyo. Hase ahaatee, Ingiriisku dheg uma jalaqsiin cabashadii Soomaalida dhulkaas deggan, wuxuuna go’aansaday inuu dhulkaas Itoobiya ku wareejiyo. Wuxuuna Ingiriisku ku adkaystay inuu tixgelinayo heshiiskii uu Itoobiya la galay sanadihii 1942,kii iyo 1944,kii ee la oran jirey Anglo-Ethiopian. Markii wareejintaas lagu dhawaaqayna waxaa magaalada Jigjiga ka dhacay mudaaharaad aad u weyn, waxaana ku dhintay 25 qof oo Soomaali ah.
Markuu sanadku ahaa 1949,kii Allaha u naxariistee geesigii soomaaliyeed Suldaan Olol Diinle oo ahaa nin aad u necbaa gumeysiga Itoobiya iyo toban nin oo kale oo ahaa kuwii ay siyaasad ahaan iyo halgan ahaanba aad isugu dhowaayeen ayaa dawladii Itoobiya xirtey. Nimankaas markii hore waxaa la isugu keenay magaalada Qalaafe, ka dibna waxaa loo gudbiyey Harar halkaas oo looga sii gudbiyey Addis Ababa. Xabsiga “Alanbaqa”—xabsigan oo aan ka soo noqoshada lahayn. Tobankaas nin waxa ay isugu jireen qabiilo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Ajuuraan, Baantu (reer shabeelle) iyo Ogaadeen. Waxaana ka mid ahaa laba nin oo Suldaanku adeer u ahaa oo la oran jirey Cabdikariim Diiriye Olol Diinle iyo Cabdullaahi Diiriye Olol Diinle. Waxaa kale oo raggaas ka mid ahaa rag Suldaanka hablihiisa ama gabdhahiisa qabey. Waxaana aakhiritaankii sanadkii (1953) halyeeygii soomaaliyeed ee ku caan baxey kasoo horjeedka gumeysiga Itoobiya Allaha u naxariistee Suldaan Olol Diinle lagu dilay Xabsiga dadka lagu cadaabo ee la yiraahdo “Alanbaqa” oo dalka Itoobiya ku yaala.
Fadlan walaal share dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u aqriyaan Taariikhda Geesigii Soomaaliyeed ee la dagaalamey Gumeysiga Itoobiya Allaha u Naxariistee Suldaan Olol Diinle.
X/voice of Somalia